कोरोना खोपले पाउँदै पूर्णता, भारतमा हुदैछ सुरु « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
माघ ३ , काठमाडौँ । शनिबारदेखि भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु हुँदैछ । भारतले कोरोना खोप कार्यक्रमका लागि आवश्यक तयारी भइसकेको बताएको छ । चीनपछि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमा कसरी सुरु हुँदैछ त कोरोना खोप कार्यक्रम ?
कोरोना खोप कत्तिको सुरक्षित छ ?
भारतमा कोरोना खोपलाई अनुमति दिनको लागि हतार गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । कोभिशिल्ड खोपको प्रभावकारिता अन्य मुलुकमा पनि परीक्षण भइसकेकाले यसमा मानिसहरुको विश्वास देखिए पनि कोभ्याक्सिनको विषयमा भने मानिसहरुले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । यो खोपको अहिले अन्तिम चरणको परीक्षण चलिरहेको छ ।
यद्यपि सरकारले भने यो खोप पनि सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको दाबी गर्दै आएको । तर, यसको प्रभावकारिताको विषयमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।